အစ္စလမ်(Islam) ဟူသော စကားလုံးသည် အရေဗစ် (Arabic) ဘာသာဖြစ်ပြီး “ဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်း” သို့မဟုတ် “မိမိ၏အလိုဆန္ဒအလုံးစုံကိုစွန့်၍ ဘုရားရှင်အားအပ်နှံခြင်း” ဟူ၍ အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ မူဆလင် (Muslim) သည် အစ္စလမ်ဘာသာကို ကိုင်းရှိုင်း လိုက်နာသူ ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည်။ အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တို့၏ ယုံကြည်ချက်အရ မိုဟာမက်သည် သူ၏အသက် (၄၀) နှစ်ပါတ်ဝန်းကျင်ခန့်ရှိသောအခါ အလာရှင်မြတ် (ဘုရားသခင်) ထံမှ ဗျာဒိတ် မြင်သည်ဟုဆိုသည်။ ကောင်းကင်တမန် Gabriel ထံမှ ဗျာဒိတ် အတွဲများစွာကို မြင်မက် ခံယူရရှိပြီးနောက်ပိုင်း AD 622 တွင် အစ္စလမ်ဘာသာကိုတည်ထောင်သည်။ မူဆလင်ဘာသာဝင်များက သူသည် ဘာသာတရားသစ်ကို တည်ထောင်သည်ဟု မခံယူပါ၊ အာဗြဟံ၊ မောရှေ၊ ဒါဝိဒ် နှင့် သခင်ယေရှု တို့အားဖော်ပြခဲ့သော ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပါတ်တော်အလုံးစုံတို့ကို ပြန်လည် မွမ်းမံသူ၊ သန့်စင်သူ ဖြစ်ပြီး၊ မက္ကာမြို့နှင့် အနီးအနားပါတ်ဝန်းကျင်ရှိ လူသားများကို စုစည်းဦးဆောင်သူ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်၊ တမန်တော်တစ်ပါးဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ သူ၏ ဘုရားတစ်ပါးသာရှိသည်ဟူသောယုံကြည်ခြင်း၊ စည်းကမ်းတင်းကြပ်လွန်းသော ဘာသာရေးလိုက်နာမှုများ၊ အခြားသူများအား အားမနာတမ်းဘာသာရေးဝေဖန်မှုများ နှင့် ငြင်းပန်းနှိပ်စက်အပြစ်ပေးတတ်သော ဘာသာရေးလိုက်နာမှုများ က အာရေဗြကျွန်းဆွယ်တွင်ထိုစဉ်အခါ၏ ကျင့်သုံးသော ဘုရားများစွာကိုကိုးကွယ်သည်ဘာသာရေးနှင့် လူမှုစနစ်တို့ကို ခြိမ်းခြောက်စပြုလာသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် မိုဟာမက်၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ထိုဘာသာရေးအဖွဲ့သည် မက္ကာမြို့၏မြောက်ဖက် မိုင် ၂၈၀ ကွာဝေးသော မဒီနာ (Medina) အရပ်သို့ ပြောင်းရွှေ့သွားကြသည်။ နောက် ရှစ်နှစ်ကြာသော အခါ မက္ကာမြို့သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာကြပြီး ထိုနောက်ပိုင်းတွင် အစ္စလမ်ဘာသာထဲသို့ လူအမြောက်အများဝင်ရောက် လက်ခံယုံကြည်လာကြသည်။ မိုဟာမက်ကွယ်လွန်သည့် AD 632 နောက်ပိုင်းတွင် အစ္စလမ်ဘာသာ သည် ဆွန်နီ (Sunnis) နှင့် ရှီးယား (Shi’as) ဟူ၍ နှစ်ခြမ်းကွဲသွားသည်။ ရှီးယား အဖွဲ့သည် ခွဲထွက်သည့် အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး ပိုမိုတင်းကြပ်သည့် ဘာသာရေးယုံကြည် မှုကိုကျင့်သုံးရုံမက နိုင်ငံတော် အုပ်ချုပ်ရေးတွင်ဘာသာရေးအကြီးအကဲများမှ ချုပ်ကိုင်သည့် စနစ်ကို သွပ်သွင်းကျင့်သုံးသည့် အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ယခုခေတ်တွင် ၈၅% ခန့်သော အစ္စလမ်ဘာသာဝင်များသည်ဆွန်နီ အဖွဲ့မှဖြစ်ပြီး ဘာသာရေးနှင့် နိုင်ငံရေး ကိုခွဲခြားကျင့်သုံးသည့် စနစ်ကိုလက်ခံသည့်အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ Sufiism ဟုခေါ်သော အလွန်သေးငယ်သည့် အခြားအဖွဲ့ငယ်တစ်ခုရှိသေးသည်။
3. အလာရှင်၏နှုတ်ကပါတ်တော် ကိုရန်ကျမ်းစာအုပ်၊ ဆွန်န (Sunnah) ဟုခေါ်သော ‘ပရောဖက်တို့၏ကျင့်ထုံး’ ကျမ်းစာအုပ် နှင့် ဟာဒစ် (Hadith) ဟုခေါ်သော မိုဟာမက် က အလာရှင် ပေးသည့်အတိုင်းရေးသားသည့် ကျမ်းစာအုပ်တို့ကို လက်ခံယုံကြည်ကျင့်သုံးသည်။ ထို့အပြင် တိုးရ (Torah) ဟုခေါ်သော အာဗြဟံရေးသည့် ကျမ်းစာအုပ်၊ ဒါဝိဒ်ရေးသားသော ဆာလံကျမ်းများ နှင့် The Gospel of Jesus တို့ကိုလည်း ယုံကြည် လက်ခံကျင့်သုံးသည်။ သို့သော် ယခုခေတ်တွင် ခရစ်ယာန်တို့အသုံးပြုသော သမ္မာကျမ်းစာအုပ်သည် အမှားများစွာနှင့် ပြည့်နှက်သည်ဟု ယုံကြည်သည်။ 4. ဂျူးနှင့် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တို့၏ အထင်ကရ ပရောဖက်ကြီးများဖြစ်သော အာဗြဟံ၊ မောရှေ၊ ဒါဝိဒ်၊ ဆောလမုန်၊ ယောဘ နှင့် သခင်ယေရှုတို့အားသူတော်စင် ပရောဖက် ကြီးများအဖြစ်လက်ခံယုံကြည်သည်။
7. သေခြင်း၏ အခြားတစ်ဖက်တွင် နိဗ္ဗန် သို့မဟုတ် ငရဲ တွင် ပြန်ရှင်ခြင်းရှိသည် ဟုယုံကြည်သည်။ အခြေခံကျင့်စဉ် (၅) ခု
4 comments on “ကမ္ဘာ့ဘာသာရေးအဖွဲ့ကြီးများအကြောင်း အကျဉ်း (အစ္စလမ်)”	Min Htike	April 26, 2013
Reply	thawngno	April 26, 2013
Reply	Min Htike	April 28, 2013
This entry was posted on March 25, 2011 by thawngno in Religions of the World, Thawngno and tagged Religion of the World, Thawngno.	Shortlink